Umbhede ku-6-Bed Mixed Dorm - I-Airbnb
Umbhede ku-6-Bed Mixed Dorm
262 okushiwo abanye
Ikamelo elihlanganyelwayo e-ihostela ibungazwe ngu-Banff
Sihamba ngezinyawo ezimfushane sisuka ezitolo zokudlela ezinhle, kanjalo nasezitolo ezinkulu, ezitolo zokudlela, nasezitolo zokudayisa utshwala. U-Banff unikeza isisekelo esihle kakhulu sokuhlola izintaba ezinhle, amachibi nezilwane zasendle endaweni phakathi nosuku kuyilapho ekuvumela ukuba uhlale nesiphuzo kuvulande ngesikhathi sakusihlwa.
Sinikeza kokubili ama-dorms namakamelo, kanye ne-Beaver Bar endaweni yokudla neziphuzo ezishibhile. Sinikeza nendawo yokupaka izivakashi, indawo yokuwasha izingubo, ikamelo elikhulu elivamile nekhishi lesivakashi.
Ideski lethu langaphambili linabasebenzi amahora angama-24 ngosuku. Sinegumbi elivamile nekhishi lezivakashi owamukelekile ukulisebenzisa. Indawo yokupaka engaphansi komhlaba imahhala kodwa ilinganiselwe futhi yilabo ofike kuqala. Sinikeza isevisi yokuwasha ekhokhelwayo futhi.
4.66 · 262 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-262
I-Banff iyidolobha elincane, futhi siseduze nayo yonke into. Isikhungo sedolobha sihamba imizuzu eyishumi, futhi kulula kakhulu ukufika kuwo wonke amapaki nezintaba ukusuka ehostela.
Ideski lethu elingaphambili livuliwe kusukela ngo-7am kuya phakathi kwamabili. Uma uhlela ukufika ngemva kwaphakathi kwamabili sicela usazise kusengaphambili!